Bangladesh: Bilaogera Nosamborina Fa Nanao Hetsi-Panoherana Nanohitra Ny Fifanarahana Ara-Angovo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jolay 2011 13:27 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, বাংলা, Français, Español, Ελληνικά, Português, English
Raikitra ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ny mpanao hetsi-panoherana nandritra ny ilay fitokonana 6 ora nanentanan'ny Komitim-pirenena ho Fiarovana ny Solika, ny Entona ary ny Harena an-kibon'ny tany, ny herinaratra ary ny Seranana manohitra nila Fifanarahana fiaraha-mitrandraka entona anaty ranomasina eo amin'ny governemanta sy ny ConocoPhillips. Sary avy amin'i Suvra Kanti Das. Fizakà-manana Demotix. 3 Jolay 2011.
Ny fitokonana tapak'andro androany nentanin'ny Komitim-pirenena ho Fiarovana ny Solika, ny Entona ary ny Harena an-kibon'ny tany, ny herinaratra ary ny Seranana [National Committee to Protect Oil, Gas, Mineral Resources, Power and Ports (NCPOGMR)], vondron'olona iray ahitàna mpikambana avy amin'ny elatra ankavia, dia nanelingelina ny fiainan'i Dhaka renivohitra satria ny ankamaroan'ireo trano fivarotana, ny toerana fandraharahàna ary sekoly dia nikatona avokoa ary vitsy ny fiara teny an-dalambe. Nodarohan'ny polisy tsy nisy indrafo ny sasany tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana ary tratry ny fisamborana faobe ry zareo. Ilay mpaaka sary fanao an-gazety sady bilaogera, Shahidul Alam, dia nanavao hatrany ny fitantarany nandritra iny andro iny miaraka aminà sary) tao amin'ny bilaoginy:
Tatitry ny vaolombelona nanatri-maso avy amin'i Nasrin Siraj:
Anu Muhammad, mpampianatra toekarena ao amin'ny Anjerimanontolon'i Jahangirnagar sady sekretera mpikambana ao amin'ilay (NCPOGMR) [National Committee to protect oil-gas-mineral resources, power and port] dia voasambotra tany Paltan androany (3 Jolay) tamin'ny 6:53 maraina. Raha iny izy nandeha nizotra ho any amin'ny biraon'ny Antoko Kaominista ao Bangladesh iny, hamonjy ireo mafàna fo hafa avy amin'ilay Komitim-pirenena ho famaliana ny antso fitokonana, dia polisy teo amin'ny 40 raha kely no tamy nanatona, nibeda azy ary nitondra azy niditra ny fiara fitondràna gadra. Nandritra ny fisamborana dia tsy niloa-bava izy. [..]
Androany, vao mangiran-dratsy, dia nanomboka nisambotra ireo mafàna fo avy ao amin'ny Komitim-pirenena ny polisy. Voalohany, tamin'ny 5:45 maraina, ny mpitarika ny Fikambanan'ny Mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Jahangirnagar no nosamborina tao Paltan. Ny birao foibe rehetra amin'ireo antokon'ny elatra havia tao Topkhana Road sy Paltan dia samy voahodidin'ny polisy vao maraim-be avokoa. Ny ankabeazan'ireo mpitarika foibe ao amin'ilay Komitim-pirenena no eo ambany fanaraha-mason'ny polisy amin'izao fotoana izao….
Vaovao vao nilatsaka: voasambotra koa i Nasrin Siraj.
Nandray anjara tamin'ilay hetsi-panoherana ireo bilaogera Bangladeshi ho fanoherana ilay fifanarahana momba ny angovo, na teo anatin'ny aterineto izany, na ivelany. Betsaka ireo bilaogera tonga nanatevin-daharana ny fitokonana omaly izay azo jerena ato anatin’ity lahatsary ity. OnnoMonosko Sharat dia mandefa saripika misy ny hets-panoheran'ireo bilaogera sady manoratra hoe:
Bilaogera nanatevin-daharana ny fitokonana. Sary nampindramin'i Sharat Chowdhury
Tonga maro tokoa ireo bilaogera tamin'ny tolakandro. Tsy nisy nanarama azy ireo, na nandrisika azy. Tonga fotsiny tamin'ny nahim-pony ry zareo, nifamory, naneho fanohanana. Misy bilaogera virtoaly 100 ao an-damosin'ireo bilaogera taza-maso teny. Be mpanjohy ny sasany. Tsy misy hoe iza no lohany….mitovy daholo.
Bilaogera sady mpandika teny ao amin'ny GV Bangla Lingua i Kowshik, nanavao ho antsika ny fitokonana nisy androany ao amin'ny bilaoginy Somewhereinblog.net [bn]:
Inoako fa fantatrareo hoe ny bilaogy Bangla malaza Dinmazur dia tanora telo samy injeniera no manoratra azy ary iray amin'ireny i Anupam Saikat Shanto. Ny lahatsoratra fanadihadiany mikasika ny solika sy ny tahirin'entona dia nanokatra ny mason'ny maro tamintsika. Tsy ela izay dia nosamborina ity bilaogera ity raha nanohitra ny tsy rariny tamin'ilay fifanarahana natao tamin'ny ConocoPhillips. Ao amin'ny tobin'ny polisy ao Shahbag izy amin'izao fotoana.
Voalohany teo amin'ny tantaran'i tontolon'ny fitorahana bilaogy Bangla ny hoe nisy bialogera iray nosamborina. Toherinay mafy ny fihazonana an'i Shanto. Tsy hahasakana ny hetsi-panoherana raha izay fisamboranareo an'i Shanto – tenq loharanom-baovao tokoa ny tontolon'ny fitorahana bilaogy Bangla amin'izao fotoana izao – saiky ny olona tsirairay no miresaka momba ity famoretana ity sy ny fivarotana ny tombontsoam-pirenena.
Fantsom-pahitalavitra iray ao an-toerana no njitatitra fa bialogera 24 no voasambotra ny androtr'iny, 23 tamin'izy ireo no efa navotsotra hatreto. Nisy ny resaka nandeha fa hoe helohina noho ny fiokona hanongam-panjakana ireo mpanao hetsi-panoherana voasambotra. Nandritr yn andro dia nameno ny sehatra samihafa fitorahana bilaogy ireo olon-tsotra mitatitra fisamborana bilaogera/mafàna fo. Biloagera maro toa an'i Ayon sy Choturmatrik no nandefa tatitra fijoroana vavolombelona arahana saripika.
Sary anaty aterineto mangataka ny hamotsorana an'i Dinmazur (Shanto). Sary nampindramin'i Kowshik.
Manoratra ilay bilaogera Jobaen Sondhi :
Ny fanentanana hanoherana ny fifanarahana amin'ny ConocoPhillips dia nanome sehatra midadasika ho an'ny hafanam-po amin'izao fotoana ho an'ireo vondrom-piarahamonina ao anaty aterineto eto amina'ny firenena. Maro no milaza fa mandany andro fotsiny manoloan ny fàfana ny bilaogera. Saingy hanaporofoana amin'izy ireny fa diso ry zareo dia nasehon'ny bilaogera fa afaka koa mandray andraikitra ivelan'ny aterineto ry zareo. Antenainay fa hanana ny lanjany eo imason'izao tontolo izao ity hetsi-panoherana ity ary dia hahazo fanohanana beb kokoa izahay.
Na ny antokon'ny mpitondra, na ny mpanohitra dia samy manao izay hahafa-po ireo vahiny sy mpanjanaka tompoiny avokoa. Tsy maintsy mamoaka ny tena endrika marin'ireo mpitantana ny bilaogera ary mitondra ny firenena ho any amin'ny làlana mahitsy.
Vaskar ao amin'ny Amra Bandhu dia mamafy fahatsapana tahaka izay ihany:
Fampitandremana ho an'ireo mpitarika mpibodo fahefana avy ao amin'ny Awami League sy ny BNP (fnamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: ny antokon'ny mpitondra sy ny mpanohitra) ny fitokonana androany
Mahfuz Jewel ao amin'ny sehatra fitorahana bilaogy Unmochon dia mahita fanantenana ao anatin'ireny hetsi-panoherana ireny:
Nanavy aho saingy tonga teny an-kianja tao Paltan nandritra ilay fitokonana tapak'andro. Rehefa nifarana ny Hartal (fitokonana) dia tsaroako ny hirifirin'ny firenena manontolo nitambesatra teo antampon-dohako. Nanjavona ny fijeriko, saingy nahita fnantenana aho tanatin'ireo masoko nanjavona ireo. Nijoro ny vahoaka. Nijoro ny tia tanindrazana. Nifoah ny fahatsiarovan-tenan'ny firenena. Miroso ireo tanora feno fahasahiana.
YAzonao jerena ny angona lahatsoratra am-bilaogy [bn] mikasika ity resaka ity nalefan'i Haseeb.
vaovao farany nalefan'i Vaskar: nafahana i Dinmozur.
17 ora izayIndia